Ny Canvas Mental dia mamafa ny elanelana misy eo amin'ny sary 2D sy 3D | Famoronana an-tserasera
Mental Canvas dia fampiharana vaovao manandrana mamafa ny elanelana misy eo amin'ny 2D sy 3D
ny algorithma sy ireo fampiharana mahira-tsaina ireo izay mandehandeha avy amin'ireo orinasa manandanja indrindra, dia mahatratra izany miaraka amin'ny talenta kely sy fahalalana zavakanto, azo atao ny mamorona sanganasa famoronana kely famolavolana lehibe. Mazava ho azy fa tsy eo am-piandohan'ny fomba vaovao hahatakarana ny famokarana zavakanto isika izay ny hevitra no ho zava-dehibe indrindra.
Ny fahatongavan'ilay mpifaninana iMac, ny Surface Studio, dia nitarika ny fisian'ny fitaovana na fampiharana vaovao avy amin'ny orinasan-rindrambaiko Mental Canvas. Iray ity fitaovana famolavolana sary sy ny haino aman-jery mamela ny mpanakanto hisarika 3D.
Ny fototry ny teknolojia ity dia novolavolain'ny ekipa mpikaroka ao Yale, notarihin'ny mpanorina ny orinasa ary profesora momba ny informatika, Julie Dorsey, Mental Canvas dia ny fampiharana voalohany amin'ny karazany izay mamela ny famoronana hanararaotra mahatsapa ny hevitr'izy ireo malalaka amin'ny sehatra virtoaly nefa tsy hanimba ny maha-izy azy na ny fombany.
Canvas Mental mamela anao kisarisarin-tanana amin'ny alàlan'ny fampiharana mba ho lasa traikefa ifaneraserana sy seho an-tsary izay azon'ny mpampiasa alain-tahaka sy voadika am-po. Amin'ny ankapobeny, raha azonao atao ny maka sary an-tsaina sy manaova foto-kevitra, dia azo averina amin'ny fiainana miaraka amin'ny Canvas Mental.
Julie Dorsey nanambara:
Ny teknolojia dia nanova ny lahatsoratra, ny sary ary ny mozika, fa ny sary zara raha nijanona tsy niova hatramin'ny Renaissance tamin'ny alàlan'ny fanahafana ireo fitaovana fanoharana izay mety ho sary amin'ny taratasy. Ny Canvas Mental dia manome endrika sary an-tsaina ny kisarisary ary mitondra azy amin'ny vanim-potoana dizitaly miaraka amina karazana fahaiza-manao vaovao hanafainganana ny fizotran'ny famoronana ary hanatsara ny hevitra fizarana.
Ny azo atolotry ny Mental Canvas dia a ohatra mamirapiratra amin'ny fomba hardware sy rindrambaiko afaka mandroso lavitra kokoa izy ireo amin'ny fahafahan'ny fitaovan-tsary. Ny Canvas Mental dia antenaina hivoaka amin'ny faran'ny taona, noho izany dia mety ho fanomezana tsara ho an'ny Krismasy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Mental Canvas dia fampiharana vaovao manandrana mamafa ny elanelana misy eo amin'ny 2D sy 3D
honorio perez verbel dia hoy izy:
Salama maraina. Ahoana no hividianako ity mpilalao fakana sary mihetsika ity. Afaka miasa amin'ny latabatra digitizer na latabatra cintyc ve ianao?
Mamaly an'i honorio perez verbel
Sary Landscape Islandy maimaim-poana